အလိုအလျောက်ရေမှုန်ရေမွှားသန့်ရှင်းရေး Mop - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်မပါ ၀ ယ်ပါ WoopShop®
အော်တို Spray သန့်ရှင်းရေး Mop
$30.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $55.99
မှစ. သင်္ဘောများ ရုရှားပြည်ထောင်စု တရုတ်နိုင်ငံ
အရောင် ပြာသော ပြာသော စိမ်းလန်းသော စိမ်းလန်းသော
ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / အပြာရောင် တရုတ် / အပြာရောင် တရုတ် / အပြာရောင် တရုတ် / အစိမ်းရောင် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / အစိမ်းရောင် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / အပြာရောင် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / အစိမ်း တရုတ် / အစိမ်း
Automatic Spray Cleaning Mop - ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / အပြာရောင် backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
အလေးချိန်: > ၅၀၀ ကီလိုဂရမ်
component အမျိုးအစား: ပလပ်စတစ်ခြင်းတောင်း + သတ္တုနင်း
ခေါင်းပုံသဏ္:ာန်: R ကိုectangle
စဉ်ဆက်မပြတ်မီးနွေးငွေ့အချိန် - 21-25 မိနစ်
Mophead အရေအတွက်: 1
Method ကို Wringing: လျှောအမျိုးအစား
ထုပ်ပိုး: 1 Mophead နှင့်အတူ
Mop လှံတံတင်ဝန် - > ၅၀၀ ကီလိုဂရမ်
ရေနွေးငွေ့ညှိခြင်းလုပ်ဆောင်ချက် - အဘယ်သူမျှမ
Mop လှံတံအမျိုးအစား: အထွေထွေလှံတံ + ပလပ်စတစ်ဗန်း
ချေးခြင်းခံနိုင်ရည်အဆင့် - grade 1.0-1.9
အပူ Up ကိုအချိန် (မိ): 1-2
စုပ်ယူမှု: <10 စက္ကန့်
ရေဓါတ်ခန်းခြောက်နှုန်း: 90% -100%
ပစ္စည်း: Microfibre အထည်အလိပ်
item အမည်: mop မှုတ်ဆေး
အရောင်: Blue- အစိမ်းရောင်
sehr zufrieden schnelste liferung
စူပါ! Доставкакурьеромдодома။ Оченьпонравилась။ рекомендую! Детиубираются)))